Aretina Alzheimer : An’hetsiny no vidin’ny fanafody -
AccueilSongandinaAretina Alzheimer : An’hetsiny no vidin’ny fanafody
Raha olona efa nahazohazo taona foana hatramin’izay no fantatra sy hita voan’ny aretina tsy fitadidiana na Alzheimer, dia fantatra amin’izao fotoana izao fa miha-tanora ireo olona efa voany. Araka ny filazan’ny filoha mpanorina ny fikambanana Madagascar Alzheimer, Rason Andrianary Olande dia 35 taona no voany zandriny amin’izao fotoana izao, any Canada. Ny tena loza anefa dia azo lazaina fa tsy misy fanafody ity aretina ity, satria tsy mahasitrana akory nefa vidiana lafo be. “Tsisy fanafody ity aretina ity, ary ireo fanafody lazaina fa mahasitrana dia vidiana lafo be, izay an’hetsiny ka tsy zakan’ny fahefa-mividin’ny malagasy. Hatreto aloha, mbola tsy naheno hoe sitran’io fanafody io fa ny fifaneraserana, fanotronana ary fitiavana no fanafody. Izany hoe, tsy avela irery ny marary”, hoy ity filoha mpanorina ny fikambanana.
Fantatra fa hanamarika ny faha-25 taona nijoroany ny fikambanana Madagascar Alzheimer masoandro mody amin’ny 19 mey ho avy izao. Fanamarihana natokana ho an’ny fianakavian’ny marary, satria ireo no tena mitondra mafy ny aretina Alzheimer, noho izy ireo sembana ara-piarahamonina. Ny fianakavian’ny marary izay tsy mba misy hahafahany miresaka sy mifanakalo hevitra noho ny fiandrasana ilay marary 24 ora isan’andro. Eo noho izany, ny havizanana, ny fahasahiranana ara-tsaina, ara-batana, ara-pitaovana, ara-bola izay mianjady aminy avokoa. Hisy moa ny diabe ho an’ny firaisankina atao amin’ny 19 mey io, “test de memoire”, fijoroana vavolombelona, fampirantiana ny asa tanana ataon’ireo zokiolona ireo. “Tao anatin’ny 25 taona dia nihaino azy foana izahay fa amin’izao fotoana izao dia ho fantatry ny fiarahamonina, inona izany fahanginana zakain’ireo fianakaviana nandritra ny fotoana maharitra”, hoy hatrany Rason Andrianary Olande. Marihina fa efa an’arivony ireo marary efa nandalo tao amin’ny ONG Madagascar alzheimer masoandro mody, fa 200 no misoratra ao, ary 6 ihany no afaka raisina ao amin’izao fotoana izao, noho ny fanaraha-maso akaiky ireo marary na dia misy mpanaraka aza.